रास्ट्रिय खबर – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर
२६ जेठ, काठमाडौं । तारा एयरको विमान जुम्लामा दुर्घटना भएको छ । तर, कुनै मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालगञ्जबाट आएको विमान ल्याण्ड गर्ने क्रममा टायर पञ्चर भएको र अगाडिको भाग तारको जालीमा ठोक्किएको थियो ।
विमानमा १८ यात्रु र दलक दलका सदस्य थिए । उनीहरु सबै सकुशल रहेको तारा एयरका भीमराज राईले जानकारी दिए ।
– दुई हेलिकप्टर चिनियाँ, एउटा अफ्रिकी आकाशमा
– लिलामीमा राखिएका ९ मध्ये ३ बिक्री, १ प्रक्रियामा
– ३ हेलिकप्टर र प्लेन किन्दै, चार स्काई ट्रक अमेरिकाले दिने
काठमाडौँ — नेपाली सेनाले लिलामीमा राखेका फ्रेन्च कम्पनीको दुई पुराना हेलिकप्टर चिनियाँ आकाशमा उड्ने भएका छन् । हेलिकप्टर तालिम दिने एक चिनियाँ कम्पनीले ती दुई हेलिकप्टरको लिलामी सकारेको हो ।
कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी साता चार दिन लगाएर नेपाली सेनाका पाइलटसहित उक्त हेलिकप्टर दक्षिणी चीन पुर्‍याइदिने छन्। हाल एयरबस हेलिकप्टरले त्यस्ता हवाई साधन निर्माण गर्छ। सेनाले भने युरो हेलिकप्टर कम्पनी हुँदै ती हेलिकप्टर खरिद गरेको हो।
दुई एमआई १७ को मूल्य २० लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य राखेर लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। पुरानो एलौटको मूल्य ५० लाख र १ करोड राखिएको छ। रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सेनाले तय गरेको न्यूनतम लिलाम मूल्य वैज्ञानिक नभएकाले खरिदकर्ता त्यति आकर्षित छैनन्।
६, वैशाख, काठमाडौं । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले चिनियाँ रेलवे ब्युरो ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सोङ रोङ जुङसँग भेट गरेका छन् ।
बिहीबार जंगी अड्डामा भएको भेटमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । क्षत्रीसँगको भेटमा चिनियाँ रेलवे ब्युरो ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुङसहित ३ जना सहभागी थिए ।
६ वैशाख, काठमाडौं । फरार अभियुक्त दीपक मनाङ्गे पक्राउ परेका छन् । प्रदेश ४ का प्रदेशभासभा सदस्य समेत रहेका उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो ।
२३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि शुक्रबार बिहान नयाँदिल्ली प्रस्थानगरेका छन् । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा उनी ५४ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै बिहान ९ बजे भारत प्रस्थान गरेका हुन् ।
काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा पत्नी राधिका, मन्त्रीहरु मातृका यादव, रघुबिर महासेठ, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, सांसदहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, कलाकारहरु लगायत छन् ।
अजरबैजानमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने उतैबाट नयाँदिल्ली जानेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल लगायतले विदाइ गरेका थिए ।
सो क्रममा नेपाली सेनाको टोलीले सलामी दिएको थियो ।
१७ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक मजाक नगर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई आग्रह गरेका छन् ।
युरोपेली युनियनतर्फ संकेत गर्दै उनले अलिअलि आवाज कहाँबाट आएको छ ? स्वीच कहाँ छ ? हेर्ने बताए । उनले भने, म सबैलाई भन्न चाहन्छौं, नेपालीहरुलाई नेपाली भएर बस्न दिनुस् । नेपाल एकतावद्ध हुन चाहन्छ, सम्बृद्ध हुन चाहन्छ ।’